Dota2 ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော Pindapanda အကွောငျး တစတေ့စောငျး – Gaming Noodle
Dota2 ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော Pindapanda အကွောငျး တစတေ့စောငျး
မကျြမှောကျခတျေဂိမျးလောကမှာ အမြိုးသားမြားသာ ကွီးစိုးနကွေပွီး အမြိုးသမီး gamer ဦးရနေညျးပါးလကျြ ရှိပါတယျ။ ဒီလိုလူနညျးစုဖွဈနတေဲ့ အမြိုးသမီး gamer မြားထဲမှာမှ ထငျရှားကြျောကွားပွီး အာရှတိုကျသား Dota2gamer အမြားစုရဲ့ စိတျနှလုံးကို ဖမျးစားထားနိုငျတာကတော့ Pindapanda လို့ လူသိမြားကွတဲ့ Pinda Rika Dorji ပဲဖွဈပါတယျ။ Pinda ကို လှပပွီး talent ရှိတဲ့ gamer နဲ့ content creator တဈဦးအဖွဈရော Astro eGG ခနျြနယျ ရဲ့ host တဈဦးအဖွဈပါ လူသိမြားကွပါတယျ။ အသကျ ၂၄ နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ pindaPandaဟာ ဘူတနျနိုငျငံသူတဈဦးလညျးဖွဈပွီး လကျရှိ Fnatic အသငျးနဲ့ MSI တို့ရဲ့ Brand Ambassador အဖွဈလညျး တာဝနျယူဆောငျရှကျနပေါသေးတယျ။
Pinda ဟာ သူမရဲ့ ဘဝဇာတျကွောငျးအခြို့နဲ့ ဂိမျးလောကအတှအေ့ကွုံမြားကို World Of Buzz (WOB) website နဲ့ အငျတာဗြူးတဈခုမှာ အခုလို ဖွကွေားသှားခဲ့ပါတယျ။
စတငျခဲ့တဲ့ ဘဝနဲ့ Dota2 ကစားခွငျး အတှအေ့ကွုံမြား
ပရိသတျအမြားစုကတော့ Pinda ကို Dota2နယျပယျမှာမှ စတငျတှမွေ့ငျဖူးကွတာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျတမျး သူမ စတငျခဲ့တဲ့ ဂိမျးနယျပယျက Super Mario ပါ။ သူမ ငယျစဉျတညျးက အဖှားဖွဈသူနဲ့အတူကစားလရှေိ့တဲ့ဂိမျးမို့ အဲဒီဂိမျးနဲ့ပဲ ပထမဆုံးစတငျလာခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ကောလိပျကြောငျးမတကျရောကျခငျအထိ Pinda ဟာ Dota2ကို မကစားဖူးသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ ယောကျြားလေးအမြားစုသာ ကစားကွတဲ့ဂိမျးဖွဈလို့ မိနျးကလေးတဈဦးအနနေဲ့ ဝငျရောကျကစားဖို့ ခကျခဲနခေဲ့တာပါ။
“Dota2ကို စ ကစားတုနျးက mic ကို လုံးဝမဖှငျ့ပဲ ကစားခဲ့ပါတယျ။ ကိုယျ့ကို မိနျးကလေးတဈဦးလို့ သိသှားတာနဲ့ အာရုံစိုကျမှုအမြားအပွားခံရပွီး အပွဈတငျဝဖေနျမှုမြား ရှိလာနိုငျလို့ ဒီလိုလုပျခဲ့တာပါ။ ကစားဖျောအမြားစုက ယောကျြားလေးတဈဦးလို့ပဲ ထငျခဲ့ကွတယျ။” လို့ Pinda က ပွောပါတယျ။
ပထမဆုံး ဂိမျး စကစားခဲ့တုနျးက မိနျးကလေးဖွဈတဲ့ Pinda ကို ကောငျးကောငျးကစားနိုငျမှာ မဟုတျဘူးလို့ပဲ လူအမြားစုက ထငျမွငျနခေဲ့ကွတာပါ။ မိနျးကလေးတဈဦးဖွဈကွောငျး သိသှားလို့ ဂိမျးထဲမှာ အာရုံစိုကျအပွဈတငျခံရတာမြိုးတှေ ရှိခဲ့လားလို့ မေးမွနျးခဲ့ရာမှာ သူမ က “ဂိမျးကို အာရုံစိုကျဖို့ပဲ အဓိကကွိုးပမျးပါတယျ။ ကိုယျ့ကို အာရုံစိုကျ အပွဈတငျတာတှေ ပွုလုပျလာခဲ့သူရှိရငျ သူတို့ကို mute လုပျပါတယျ။” လို့ ပွောပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျ ဂိမျးလောကဟာ တကျသဈစမိနျးကလေး gamer တဈဦး အခွခေဖြို့ အခွအေနကေောငျးတှေ ပေးနပွေီလားလို့ မေးမွနျးခဲ့ရာမှာ “အပွညျ့အဝတော့ မပေးသေးပါဘူး။” လို့ ဖွခေဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူမ စတငျခဲ့တဲ့ အရငျအခြိနျတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ အခုအခြိနျမှာ အမြားကွီး ပိုအဆငျပွနေပေါပွီလို့လညျး ထပျလောငျးပွောခဲ့ပါတယျ။
Game လောကမှာ ဘယျလိုစိနျချေါမှုမြိုးတှကေို Pindapanda ကွုံတှခေဲ့ရလဲ?
“ပရိသတျတှကေ ကိုယျ့ကိုခြောတယျ လှတယျလို့ ခြီးမှနျးရုံသကျသကျကို သဘောကနြှဈသကျမနပေါဘူး။ လကျရှိမိနျးကလေး gamer အမြားစုဟာ ဒီလိုနညျးလမျးနဲ့ပဲ ဆှဲဆောငျပွီး စတငျနကွေလို့ပါ” လို့ Pinda က ပွောပါတယျ။ ဂိမျးထဲမှာ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ကစားသလို content မြား video မြား ပွုလုပျရာမှာလညျး အရညျအသှေးကောငျးအောငျ စနဈတကပြွုလုပျကွောငျးလညျး ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး လူအမြားစုဟာ သူမ ရဲ့ ရုပျရညျသှငျပွငျထကျ သူမ ပွုလုပျလိုကျတဲ့ အလုပျမြားကိုပဲ အာရုံစိုကျလာကွတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အပွဈတငျဝဖေနျခံရရငျ ဘယျလိုရငျဆိုငျလဲ လို့ မေးမွနျးခဲ့ရာမှာတော့ “နတေ့ဈနရေဲ့ အဆုံးမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို ဘယျလိုထငျမွငျမိလဲ ဆိုတာကပဲ အဓိကပါ။” လို့ ဖွခေဲ့ပါတယျ။
အငျဂငျြနီယာတဈယောကျ ဘဝကနေ pro ဂိမျမာဘဝကို ပွောငျးလဲဖွဈခဲ့ပုံ
မလေးရှားနိုငျငံကို စတငျရောကျရှိစဉျက Pinda ဟာ civil engineering ကြောငျးသူတဈဦးပါ။ သူမရဲ့ မိသားစုဟာ သူမကို အငျဂငျြနီယာတဈဦးဖွဈစခေငျြခဲ့ကွပမေယျ့ ဂိမျးလောကဘကျကို ရောကျရှိလာဖို့ ကံတရားက ချေါဆောငျလာခဲ့ပါတယျ။ သူငယျခငျြးတဈယောကျက သူမ ကို Astro ရဲ့ TV host လူရှေးပှဲကို ဝငျရောကျဖို့ အကွံပေးခဲ့တာပါ။
“လူရှေးပှဲဝငျတဲ့အခြိနျမှာ အခွအေနဆေိုးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အားမလြော့ပဲ အကောငျးဆုံးကွိုးပမျးခဲ့ပါတယျ။ ပှဲက မထှကျခှာမီမှာ တာဝနျရှိသူမြားကို ကြှနျမရဲ့ channel ကို တဈခကျြလောကျ ကွညျ့ရှုပေးဖို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။” လို့ Pinda က ပွောပါတယျ။ ဒီလိုပွုလုပျခဲ့တဲ့အတှကျလညျး လူရှေးပှဲအပွီး ရကျအနညျးငယျအကွာမှာ esports channel တဈခုရဲ့ host တဈဦးအနနေဲ့ သူမ လိုခငျြတဲ့အလုပျကို ရရှိခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ထူးခွားတာက အဲဒီအခြိနျမှာ Pinda ရဲ့ မိသားစုဟာ သူမကို မကနျ့ကှကျပဲ ထောကျခံပေးခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ အဖိုးက သူမ ဆန်ဒရှိပွီး ပြျောရှငျမယျ့အလုပျကို ရှေးခယျြဖို့ အခှငျ့အရေးပေးခဲ့လို့ အံ့အားသငျ့ခဲ့ရတယျလို့ Pinda က ပွောပါတယျ။ အဖိုးဖွဈသူဟာ သူမ ရဲ့ မိဘတှကေိုတောငျ ဒီလို အလိုမလိုကျခဲ့လို့ အံသွခဲ့တာဖွဈတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။ Channel မှာ ပရိသတျခကျြခငျြးမရခဲ့ပမေယျ့ အခွခေလြိုကျတဲ့ အလုပျကို အကောငျးဆုံး ကွိုးပမျးလာခဲ့ပါတယျ။
Esports လောကမှာရှငျသနျနရေတာ အမြားထငျသလို အမွဲတမျး ပြျောရှငျစရာတှေ ပွညျ့နတောမဟုတျကွောငျး
ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါက Content creator တဈဦးအဖွဈရော esports professional တဈဦးအဖွဈပါ တဈပွိုငျတညျး လုပျဆောငျရတာဟာ အခကျအခဲမြားရှိကွောငျးကိုလညျး Pinda က ပွောပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ esports career အတှကျ ဂိမျးကစားရတာဟာ အလှနျအခြိနျပေးရလို့ အလုပျနှဈခုကွား ရုနျးကနျရကွောငျး ပွောခဲ့တာပါ။
“အခြိနျတှကွောလာတာနဲ့အမြှ ဂိမျးလောကနဲ့ ကြှနျမဟာ ပိုမိုသကျဆိုငျမှုရှိလာခဲ့သလို အရငျကထကျလညျး အမြားကွီး ပိုကစားဖွဈပါတယျ။ တဈနကေို့ အနညျးဆုံး ၆ နာရီလောကျ ဂိမျးကစားဖွဈပါတယျ။” လို့ Pinda က ပွောပါတယျ။
ငယျရှယျတဲ့ ဂိမျမာတှကေို Pindapanda က ဘာတှေ အကွံပေးခဲ့လဲ
ဒီလို စိတျကူးနဲ့ တဈထပျတညျးကတြဲ့အလုပျကို ရရှိတဲ့အတှကျ Pinda ဟာ စိတျပြျောရှငျမှုရှိကွောငျး၊ စိတျကူးထဲကအလုပျနဲ့ ရညျရှယျခကျြမြားကို လှတျလပျစှာ အကောငျအထညျဖျောရတာဟာ ဘဝမှာ ကွီးမားတဲ့ ဆုလဒျတဈခုဖွဈကွောငျး တို့ကိုလညျး Pinda က ပွောပါတယျ။ “ဒီအလုပျတှကေို လုပျနိုငျတာဟာ အလုပျအပျေါမှာ ပြျောရှငျမှုရှိလို့ပါ။ လူအမြားစုဟာ ဒီလိုလုပျဖို့ အခှငျ့အလမျးတှကေို လကျရှိအခြိနျထိ မရရှိကွသေးဘူး။” လို့လညျး ပွောခဲ့ပါတယျ။
“ပတျဝနျးကငျြက လူတှဟော သငျ့ဘဝကို ပဲ့ကိုငျသူတှေ မဟုတျပါဘူး။ သငျသညျသာ သငျ့ဘဝကို ပဲ့ကိုငျသူပါ။ သူတို့ ဘယျလိုပဲ ထငျမွငျပါစေ။ ကိစ်စမရှိပါဘူး။ ကရြှုံးသှားခဲ့ရငျလညျး ပွဿနာ မရှိပါဘူး။” လို့ Pinda က ပွောပါတယျ။ Plan B တဈခုကို အမွဲထားရှိသငျ့သလို ဆုံးရှုံးမှုတှဖွေဈလာရငျလညျး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရငျဆိုငျနိုငျအောငျ ပွငျဆငျထားသငျ့ကွောငျးလညျး လူငယျ gamer မြားအတှကျ အကွံပေးခဲ့ပါတယျ။
Pindapanda ဟာ တကျသဈစ gamer မြားအတှကျ အားကအြတုယူစရာ gamer တဈဦးဖွဈသလို အမြိုးသမီးရှားပါးတဲ့ ဂိမျးလောကမှာ အခိုငျအမာရပျတညျနသေူတဈဦးလညျး ဖွဈတဲ့အတှကျ သူမရဲ့ အငျတာဗြူးအဖွအေခြို့ကို တငျဆကျပေးလိုကျရပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျ တငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
Dota2 ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် Pindapanda အကြောင်း တစေ့တစောင်း
မျက်မှောက်ခေတ်ဂိမ်းလောကမှာ အမျိုးသားများသာ ကြီးစိုးနေကြပြီး အမျိုးသမီး gamer ဦးရေနည်းပါးလျက် ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလူနည်းစုဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး gamer များထဲမှာမှ ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး အာရှတိုက်သား Dota2gamer အများစုရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ဖမ်းစားထားနိုင်တာကတော့ Pindapanda လို့ လူသိများကြတဲ့ Pinda Rika Dorji ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pinda ကို လှပပြီး talent ရှိတဲ့ gamer နဲ့ content creator တစ်ဦးအဖြစ်ရော Astro eGG ချန်နယ် ရဲ့ host တစ်ဦးအဖြစ်ပါ လူသိများကြပါတယ်။ အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ pindaPandaဟာ ဘူတန်နိုင်ငံသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိ Fnatic အသင်းနဲ့ MSI တို့ရဲ့ Brand Ambassador အဖြစ်လည်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါသေးတယ်။
Pinda ဟာ သူမရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းအချို့နဲ့ ဂိမ်းလောကအတွေ့အကြုံများကို World Of Buzz (WOB) website နဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ အခုလို ဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
စတင်ခဲ့တဲ့ ဘဝနဲ့ Dota2 ကစားခြင်း အတွေ့အကြုံများ
ပရိသတ်အများစုကတော့ Pinda ကို Dota2နယ်ပယ်မှာမှ စတင်တွေ့မြင်ဖူးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း သူမ စတင်ခဲ့တဲ့ ဂိမ်းနယ်ပယ်က Super Mario ပါ။ သူမ ငယ်စဉ်တည်းက အဖွားဖြစ်သူနဲ့အတူကစားလေ့ရှိတဲ့ဂိမ်းမို့ အဲဒီဂိမ်းနဲ့ပဲ ပထမဆုံးစတင်လာခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကောလိပ်ကျောင်းမတက်ရောက်ခင်အထိ Pinda ဟာ Dota2ကို မကစားဖူးသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ယောကျာ်းလေးအများစုသာ ကစားကြတဲ့ဂိမ်းဖြစ်လို့ မိန်းကလေးတစ်ဦးအနေနဲ့ ဝင်ရောက်ကစားဖို့ ခက်ခဲနေခဲ့တာပါ။
“Dota2ကို စ ကစားတုန်းက mic ကို လုံးဝမဖွင့်ပဲ ကစားခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို မိန်းကလေးတစ်ဦးလို့ သိသွားတာနဲ့ အာရုံစိုက်မှုအများအပြားခံရပြီး အပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများ ရှိလာနိုင်လို့ ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ကစားဖော်အများစုက ယောကျာ်းလေးတစ်ဦးလို့ပဲ ထင်ခဲ့ကြတယ်။” လို့ Pinda က ပြောပါတယ်။
ပထမဆုံး ဂိမ်း စကစားခဲ့တုန်းက မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ Pinda ကို ကောင်းကောင်းကစားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပဲ လူအများစုက ထင်မြင်နေခဲ့ကြတာပါ။ မိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိသွားလို့ ဂိမ်းထဲမှာ အာရုံစိုက်အပြစ်တင်ခံရတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့လားလို့ မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ သူမ က “ဂိမ်းကို အာရုံစိုက်ဖို့ပဲ အဓိကကြိုးပမ်းပါတယ်။ ကိုယ့်ကို အာရုံစိုက် အပြစ်တင်တာတွေ ပြုလုပ်လာခဲ့သူရှိရင် သူတို့ကို mute လုပ်ပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
လက်ရှိအချိန် ဂိမ်းလောကဟာ တက်သစ်စမိန်းကလေး gamer တစ်ဦး အခြေချဖို့ အခြေအနေကောင်းတွေ ပေးနေပြီလားလို့ မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ “အပြည့်အဝတော့ မပေးသေးပါဘူး။” လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမ စတင်ခဲ့တဲ့ အရင်အချိန်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အခုအချိန်မှာ အများကြီး ပိုအဆင်ပြေနေပါပြီလို့လည်း ထပ်လောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
Game လောကမှာ ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုမျိုးတွေကို Pindapanda ကြုံတွေခဲ့ရလဲ?
“ပရိသတ်တွေက ကိုယ့်ကိုချောတယ် လှတယ်လို့ ချီးမွန်းရုံသက်သက်ကို သဘောကျနှစ်သက်မနေပါဘူး။ လက်ရှိမိန်းကလေး gamer အများစုဟာ ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ပဲ ဆွဲဆောင်ပြီး စတင်နေကြလို့ပါ” လို့ Pinda က ပြောပါတယ်။ ဂိမ်းထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကစားသလို content များ video များ ပြုလုပ်ရာမှာလည်း အရည်အသွေးကောင်းအောင် စနစ်တကျပြုလုပ်ကြောင်းလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း လူအများစုဟာ သူမ ရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ထက် သူမ ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်များကိုပဲ အာရုံစိုက်လာကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အပြစ်တင်ဝေဖန်ခံရရင် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်လဲ လို့ မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ “နေ့တစ်နေ့ရဲ့ အဆုံးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုထင်မြင်မိလဲ ဆိုတာကပဲ အဓိကပါ။” လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် ဘဝကနေ pro ဂိမ်မာဘဝကို ပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ပုံ
မလေးရှားနိုင်ငံကို စတင်ရောက်ရှိစဉ်က Pinda ဟာ civil engineering ကျောင်းသူတစ်ဦးပါ။ သူမရဲ့ မိသားစုဟာ သူမကို အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်စေချင်ခဲ့ကြပေမယ့် ဂိမ်းလောကဘက်ကို ရောက်ရှိလာဖို့ ကံတရားက ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူမ ကို Astro ရဲ့ TV host လူရွေးပွဲကို ဝင်ရောက်ဖို့ အကြံပေးခဲ့တာပါ။
“လူရွေးပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာ အခြေအနေဆိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားမလျော့ပဲ အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ပွဲက မထွက်ခွာမီမှာ တာဝန်ရှိသူများကို ကျွန်မရဲ့ channel ကို တစ်ချက်လောက် ကြည့်ရှုပေးဖို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။” လို့ Pinda က ပြောပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်း လူရွေးပွဲအပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ esports channel တစ်ခုရဲ့ host တစ်ဦးအနေနဲ့ သူမ လိုချင်တဲ့အလုပ်ကို ရရှိခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားတာက အဲဒီအချိန်မှာ Pinda ရဲ့ မိသားစုဟာ သူမကို မကန့်ကွက်ပဲ ထောက်ခံပေးခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ အဖိုးက သူမ ဆန္ဒရှိပြီး ပျော်ရွှင်မယ့်အလုပ်ကို ရွေးချယ်ဖို့ အခွင့်အရေးပေးခဲ့လို့ အံ့အားသင့်ခဲ့ရတယ်လို့ Pinda က ပြောပါတယ်။ အဖိုးဖြစ်သူဟာ သူမ ရဲ့ မိဘတွေကိုတောင် ဒီလို အလိုမလိုက်ခဲ့လို့ အံသြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ Channel မှာ ပရိသတ်ချက်ချင်းမရခဲ့ပေမယ့် အခြေချလိုက်တဲ့ အလုပ်ကို အကောင်းဆုံး ကြိုးပမ်းလာခဲ့ပါတယ်။
Esports လောကမှာရှင်သန်နေရတာ အများထင်သလို အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်စရာတွေ ပြည့်နေတာမဟုတ်ကြောင်း
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က Content creator တစ်ဦးအဖြစ်ရော esports professional တစ်ဦးအဖြစ်ပါ တစ်ပြိုင်တည်း လုပ်ဆောင်ရတာဟာ အခက်အခဲများရှိကြောင်းကိုလည်း Pinda က ပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့် esports career အတွက် ဂိမ်းကစားရတာဟာ အလွန်အချိန်ပေးရလို့ အလုပ်နှစ်ခုကြား ရုန်းကန်ရကြောင်း ပြောခဲ့တာပါ။
“အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ဂိမ်းလောကနဲ့ ကျွန်မဟာ ပိုမိုသက်ဆိုင်မှုရှိလာခဲ့သလို အရင်ကထက်လည်း အများကြီး ပိုကစားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၆ နာရီလောက် ဂိမ်းကစားဖြစ်ပါတယ်။” လို့ Pinda က ပြောပါတယ်။
ငယ်ရွယ်တဲ့ ဂိမ်မာတွေကို Pindapanda က ဘာတွေ အကြံပေးခဲ့လဲ
ဒီလို စိတ်ကူးနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျတဲ့အလုပ်ကို ရရှိတဲ့အတွက် Pinda ဟာ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုရှိကြောင်း၊ စိတ်ကူးထဲကအလုပ်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များကို လွတ်လပ်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရတာဟာ ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ ဆုလဒ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တို့ကိုလည်း Pinda က ပြောပါတယ်။ “ဒီအလုပ်တွေကို လုပ်နိုင်တာဟာ အလုပ်အပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုရှိလို့ပါ။ လူအများစုဟာ ဒီလိုလုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေကို လက်ရှိအချိန်ထိ မရရှိကြသေးဘူး။” လို့လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေဟာ သင့်ဘဝကို ပဲ့ကိုင်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်သည်သာ သင့်ဘဝကို ပဲ့ကိုင်သူပါ။ သူတို့ ဘယ်လိုပဲ ထင်မြင်ပါစေ။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကျရှုံးသွားခဲ့ရင်လည်း ပြဿနာ မရှိပါဘူး။” လို့ Pinda က ပြောပါတယ်။ Plan B တစ်ခုကို အမြဲထားရှိသင့်သလို ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာရင်လည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားသင့်ကြောင်းလည်း လူငယ် gamer များအတွက် အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။
Pindapanda ဟာ တက်သစ်စ gamer များအတွက် အားကျအတုယူစရာ gamer တစ်ဦးဖြစ်သလို အမျိုးသမီးရှားပါးတဲ့ ဂိမ်းလောကမှာ အခိုင်အမာရပ်တည်နေသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် သူမရဲ့ အင်တာဗျူးအဖြေအချို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ် တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။